पैसा कमाउन ठूलै बिजनेस गर्नु पर्दैन, यी १० व्यवसाय गर्नुहोस् – live 60media
काठमाडौं । नेपाल एउटा हुर्कदैं गरेको अर्थतन्त्र हो । जसलाई बिकासोन्मूख देश भन्न पनि अलि गाह्रै पर्छ । त्यसैले यहाँ समृद्धि प्राप्त गर्न निकै गाह्रो र सजिलो दुवै छ ।सिर्जनशील सोच, दृष्टिकोण र आइडिया भए सानो लगानीमै राम्रो नाफा कमाउने ब्यवसाय बनाउन नसकिने होइन ।
२. मोबाइल पसल पनि राम्रो संभावना भएको सानो ब्यवसाय हो । अहिले अधिकाशं नेपालीका हातहातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । र, यो क्रम बढ्दो छ । त्यसैले मोबाइल मर्मत र नयाँ–पुरानो मोबाइलको ब्यापारको राम्रो संभावना देखिन्छ । मोबाइल पसल भनेको राम्रो नाफा राखेर बेच्न सकिने पसल हो । र, मोबाइल सम्बन्धी स–साना पाटपुर्जाको पनि राम्रो ब्यापार हुने मोबाइल ब्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालको आधुनिकतामा प्रवेश सँगै यो ब्यवसाय अझै फस्टाउनेमा कुनै शंका छैन् ।
३. नेपालका स्कुल र कलेजहरुमा कम्प्युटरको अध्ययन अनिवार्य भैसकेका छन् । कुनै पनि जागिरमा आवेदन दिँदा पनि सामान्य कम्प्युटरको ज्ञान अनिवार्य भैसकेको छ । त्यसैले कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्सटिच्युट पनि राम्रो संभावना भएको ब्यवसाय हो । तर, यसका लागि कम्प्युटर ट्रेनर भने प्रबिधिको क्षेत्रमा निरन्तर अद्यावधि भैराख्न जरुरी छ ।
९. नेपालको राम्रो भौगोलिक अवस्थिति र सांस्कृतिक बिबिधताका कारण पर्यटकको राम्रो संभावना छ । पर्यटनको संभावना भएको ठाउँमा ट्राभल एजेन्सी र टुरिस्ट गाइडको राम्रो ब्यवसायीक संभावना हुने नै भयो । कम लगानीमा शुरु गर्न सकिने यी ब्यवसायको युवाहरुमाझ ठूलो संभावना छ ।
← हेर्नुहोस टिकटक ले गर्दा प्रेम गरेर ल्याएकी श्रीमती टाप कसीन। बिदेशबाट आउदा न श्रीमती न पैसा (भिडियो सहित)
चितवनमा अफ्रिकी यूवतीसँग राजेन्द्र खड्गी, रुवी राणासँग भेटिए रोमान्टिक मुडमा ! →